स्पेन, Alicante आकर्षण, फोटो र समीक्षा
Alicante (स्पेन), तल प्रस्तुत छ फोटो जो, यो भ्यालेन्सिया दोस्रो ठूलो शहर हो। यो भू-मध्य तट मा स्थित छ। शहर Alicante को प्रान्त को राजधानी छ। जो सबैभन्दा उत्साही समीक्षा छन् आकर्षण, पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छन्।
शहर थप विशेष पहाडलाई र पहाड नजिकै, सादा पार गर्न भू-मध्य सागर मा स्थित छ, र। Alicante को ठाँउहरु मा के कुरा, यो उल्लेख गर्नुपर्छ माउन्ट Benakantil। यसको उचाइ 169 मिटर छ। यो स्यान्टाबारबारा एक गढ-महल स्थित छ। Alicante भन्दा पर्वतमा टावर र यसलाई अझ लोकप्रिय पर्यटकहरु बीच बनाउँछ जो शहर, एक धेरै असामान्य उपस्थिति दिन्छ।
Alicante को समुद्र तट
शहर को ठाँउहरु परिदृश्य सीमित छैन। विशेष उल्लेखनीय समुद्री तट छन्। तिनीहरूले सम्पूर्ण तट साथ अवस्थित छ। एल Saladar, Agua Amarga, एल Postiguet, ला Albufereta ला Almadraba, सान जुआन: दक्षिण बाट उत्तर निम्न तटों छन्। तिनीहरूले Tabarka को द्वीप मा उपलब्ध पनि छन्। काबो डे लस Huertas सान जुआन र ला Albuferta को समुद्र तट बीच स्थित छ। ला Palmera, लस Hudios, Kantalares र Kalabarda: त्यहाँ खण्ड धेरै छ।
शहर को हाइट्स मा फरक
Alicante (स्पेन) मा धेरै विविध परिदृश्य। क्षेत्र शोभा गर्न पहाड सुवक्ता गवाही को भन्दा माथि फोटोहरू। समुद्र स्तर (0 मीटर को ऊंचाई मा) स्तर मेयर कार्यालय छ। केही छिमेक नै व्यवस्था छ। San Blas र बोन REPOS को समुद्र तट - Alicante मा ज्ञात स्थलहरू -, समुद्र स्तर माथि तीस मिटर माथि छन्, जबकि लस एन्जलस - सत्तरी-पाँच माथि। विशेष गरी Virgen डेल उपाय र उद्यान को शहर हाइलाइट। तिनीहरूले समुद्र स्तर माथि असी पाँच मिटर भन्दा बढि को एक उचाइ मा अवस्थित छ। यस नगरपालिका को कुल क्षेत्र वर्ग किलोमिटर सय बारेमा दुई छ। उच्चतम बिन्दु को Cabezon डे ओरो छ। यो स्थान मीटर हजारौं को ऊंचाई मा स्थित छ। शहर मा त्यहाँ पहाड धेरै छैन। उदाहरणका लागि, लस Tachos, Sancho, Fontkalent, मध्य, Alkoraya र Aguilas जस्ता दायरा।
मार्गहरू विभिन्न संस्करण
को राय धेरै पर्यटकहरु मा रिसोर्ट, को undoubted लाभ को व्यापक यातायात सञ्जाल छ। शहर को केन्द्र देखि बाह्र किलोमिटर त्यहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय छ Alicante को विमानस्थल। यसलाई सजिलै दुई सर्वोत्कृष्ट मार्गहरू पहुँच योग्य छ। रेखा एन-332 वा एक-7 मा पुग्न सकिन्छ। शहर केन्द्र विमानस्थलमा देखि दूरी दुवै दिशामा आठ भन्दा कम किलोमिटर छ। यात्रा समय - कुनै थप पन्ध्र मिनेट भन्दा। यो भीड घण्टा धेरै समय रूपमा दुई पटक खर्च गरिएको छ। विशेष बस हरेक प्लाजा डेल Maar देखि चालीस मिनेट चल्छ। टिकटको एक यूरो लागत। अत्यधिक रेल जडानहरू विकास - यो स्पेन जस्तै देश को विशेषताहरु मध्ये एक छ। जो पर्यटक विशाल संख्या हरेक वर्ष आकर्षित एलिकान्टे आकर्षण, W देश को धेरै शहर संग वेब / जोडिएको छ। ओस्लो, मैड्रिड र बार्सिलोना बाट गाडिहरु दैनिक चलाउनुहोस्। प्रान्तीय सबै ठूलो केन्द्र किनभने तिनीहरू जडान छन्।
डिबग बस सेवा - अर्को सुविधा स्पेन छ जो। Alicante आकर्षण सबैभन्दा देश मा आकर्षक बीच छलफल गर्दै छन्, लगभग सबै पोस्ट छ प्रमुख शहर र सहर। युरोप बाट पर्यटकहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन। तिनीहरू भन्न शहर यात्री बिल्कुल कुनै समस्या हुन सक्छ।
Alicante को प्रान्त को स्पेन सबै भन्दा राम्रो रिसोर्ट क्षेत्रको छ। धेरै पर्यटकहरु आफ्नो क्षेत्र मा स्थित छैन केवल वास्तुकला र परिदृश्य स्मारक आकर्षित छन्। धेरै, सबै खाता अनुसार, अत्यधिक पर्यटकहरु द्वारा सराहना थिए Alicante को समुद्र तट, मा केवल आउनुहोस्। यसलाई सधैं सफा र सहज छ, र तट साथ सानो क्याफे संग सुसज्जित छन्। यो रिसोर्ट सधैं सुन्दर मौसम छ। कोमल सूर्य र समुद्र को पर्यटक सिजन भर आगंतुकों प्रसन्न हुन्छु। Alicante मा धेरै लोकप्रिय परिवार पर्यटन। यो रिसोर्ट सहज बाँकी सबै अवस्था, मात्र वयस्क तर पनि छोराछोरीलाई छ। सडक यातायात सजिलो, धेरै पर्यटक अनुसार, प्रान्तीय को स्पष्ट लाभ को अर्को छ। लोकप्रिय र नजिकका स्थित शहर को सरहद र अन्य शहर को पर्यटन। यस रिसोर्टमा आफ्नो रहन को आफ्नो छाप साझेदारी गर्ने सबैलाई, स्थानीय होटल र होटल, युरोपेली गुणस्तर स्तर पूरा सेवाको स्तर बारे उत्साहित।
Alicante। आकर्षण। फोहरा
शहर मा सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थान ताराहरु को क्षेत्र छ। यसलाई यहाँ हरेक वर्ष पर्यटक एक विशाल संख्या बगाल। प्रसन्न पाहुनाहरूसँग मूल फोहरा बारेमा बोल्न। यो 30-एँ मा बनाइएको थियो। गत शताब्दीको। आफ्नो परियोजनाको लागि स्थानीय मूर्ति दानियल Banyuls मार्टिनेज भेटे। यो स्वतन्त्रता स्क्वायर भनिन्छ स्पेन नागरिक अशांति को सुरु नभए सम्म ठाँउ हो। प्रारम्भिक 50s मा ठूलो लोकप्रियता गरिन्थ्यो। यहाँ अधिकांश मानिसहरू राति देख्न सकिएन। शहर प्रशासन गाते छहरा मा निःशुल्क प्रदर्शन को खुसी बासिन्दाहरू छ। वर्तमानमा, क्षेत्र फुटबल क्लब हर्कुलेसक्लस्टर को प्रशंसक लागि भेला ठाउँ भएको छ। आफ्नो मनपर्ने टोली जित्छ गर्दा तिनीहरूले फोहरा मा ठूलो स्नान पकड।
धेरै रोचक क्षेत्रमा Alicante को धनी प्रान्त। आकर्षण, जो को फोटो विशेष गरी ऐतिहासिक स्थानहरु प्रेमीहरूलाई आकर्षित भ्रमण समयमा गर्न सकिन्छ। धेरै पर्यटकहरु Santa Pola महल आकर्षित छन्। यो Glorieta वर्ग मा स्थित छ। यो महल-गढ को xvi शताब्दीमा बनाइएको थियो। यसको वास्तुकला पुनर्जागरण को शैली छ। इटाली परियोजना ईन्जिनियरहरु कायम राख्न लागि जिम्मेवार। निर्माण 1557 मा पूरा भएको थियो। भवन निर्माण बर्नार्डिनो डी Cardenas को आदेश मा सुरु भयो। जबकि समुद्री डाकू आक्रमण साधारण मानिन्छ थिए। संरचना तिनीहरूलाई रक्षा गर्न seafarers सक्षम, राखे थियो। निर्माण वर्ग गढ छ। यो दुई किला र धेरै पर्खाल टावर छ। तिनीहरूले दक्षिण-पश्चिम र उत्तर-पूर्वी कुनामा मा अवस्थित छ। पहिलो किला ड्यूक लागि दरबार रूपमा सेवा गरे। निर्माण नै भएको पुनर्जागरण शैली सैन्य मा बनाइएको थियो। मा दक्षिण-पूर्व र उत्तर-पश्चिम कुनामा, "फोर्ट राजा" र स्थित हो "फोर्ट ड्यूक।" पत्थर गढ टावर सँगै लिङ्क। cornices संग बाह्य पर्खाल मात्र किला छ। दक्षिण पश्चिम छेउमा गढ गर्न मुख्य प्रवेश छ। यो एक स्वतन्त्र खडा पत्थर arches रूपमा डिजाइन गरिएको छ। समय को मान्यता अनुसार, त्यो र प्रवेश पत्र "एल" जस्तै निर्माण गरिएको छ। बाहिरी पक्ष कुनै विशेष सुविधाहरू छ। को भित्री ठाउँ सिपाहीहरूले लागि आवासीय सुविधा भरिएको छ। तिनीहरूले तपाईं हतियार यार्ड मा हुन सक्छ जो मार्फत ढोका र Windows, छ। हेर्न धेरै पनि छन्। समुद्री संग्रहालय, मण्डप Virgen डे Loreto र राम्रो तरिकाले गर्न शस्त्रागार यार्ड। टावर्स मा प्राप्त र किला आंगन मार्फत हुन सक्छ। यो वर्ग आकारको छ र कुनामा राउण्ड छ। हाल, एक सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा प्रयोग महल।
Tabarca को आइल
Santa Pola को महल मा वयस्क थप रोचक हुनेछ। त्यहाँ Alicante मा, धार्मिक उत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू छन्। बच्चाहरु को लागि आकर्षण, तर पनि प्रान्त मा उपस्थित छन्। एक बच्चा खुसी गर्न, तपाईं निश्चित Tabarka को द्वीप भ्रमण गर्नुपर्छ। यो अक्सर Spaniards र समुद्री बीच लडाई राख्न प्रयोग गरिन्छ। स्थानीय एलिकान्टे बचाव। आकर्षण (जो को फोटो माथि प्रस्तुत छ), द्वीप साँच्चै आश्चर्यजनक छ। यहाँ भ्रमण गरेका जसले पर्यटकहरु द्वारा उल्लेख रूपमा, त्यो प्रान्त सबैभन्दा रोचक ठाउँहरू मध्ये एक मानिन्छ।
आनन्द संग बच्चाहरु यो जादुई दुनिया उपस्थित। यो Ibi मा स्थित छ। यो खिलौने को प्रसिद्ध उपत्यकाका केहि शहर मध्ये एक छ। यो किनभने यसको क्षेत्र मा सम्बन्धित बिरुवाहरु को ठूलो परिमाणमा को यो नाम पाए। संग्राहलय बच्चाहरु प्राचीन खिलौने को एक ठूलो रकम प्रसन्न तुल्याउन सक्छौं। छोराछोरी पनि निर्माण को इतिहास र प्रविधि सिक्न।
संग्रहालय भ्रमण पूर्ण छोराछोरीलाई संग छुट्टी विविधता गर्न सक्नुहुन्छ। यो Villajoyosa को शहर मा स्थित छ। संग्रहालय चकलेट को उत्पादन को लागि बिरुवाहरु नजिकै स्थित छ। मिठाई बनाउन एक आकर्षक प्रक्रिया त्यहाँ देखाइएको छ। निस्सन्देह, उत्पादनहरु स्वाद गर्न सकिन्छ।
आकर्षण कुर्स्क। स्मारक, वास्तुकला, संग्रहालय, फोटो
मोरक्को फोटो आकर्षण र रिसोर्ट्स
ब्रुग्स को मुख्य ठाँउहरु विचार
को नुन ताल भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ? चेल्याबिन्स्क क्षेत्रका यस को लागि आदर्श छ
हामी के स्पेन मूल्यांकन? सन्त Susanna - शहर-सपना
एक रसिद बिना सामान फिर्ता - गाह्रो छ
"Mosquito" - antiship मिसाइल
कसरी घाँटी लागि चिकित्सा टिप्न? कारणहरू र घाँटी विभिन्न रोगहरु को नतिजा
आँखा मा फ्ल्यास: गराउनुहुन्छ, लक्षण
टाटु Egora Krida र संक्षिप्त जीवनी
सीमान्त उपयोगिता, हाशिये उपयोगिता diminishing को व्यवस्था। अर्थशास्त्र को व्यवस्था
Immunoglobulin जटिल तयारी "उपकरण": प्रयोगको लागि निर्देशन
अमेरिकी कर्ल - बिरालो साथी। प्रजाति को विवरण
को साँप सांप को वर्ष मा आशा के गर्ने? को साँप को वर्ष मा जन्म: Horoscope
को वासस्थानमा विशेषताहरु: बिरुवाहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ हावा को गुण के-के हुन्